Izindaba - Yikuphi ukukhanya okusetshenziselwa ukushutha amavidiyo amafushane? Ukuqalisa ngezibani zokukhala
Yikuphi ukukhanya okusetshenziselwa ukuthwebula amavidiyo amafushane? Ukuqalisa ngezibani zokukhala
Inkundla yevidiyo eshisayo yanamuhla, abantu abaningi benza amavidiyo njengendlela ejabulisa kakhulu yokuziveza, babe amathonya, bahehe izethameli futhi babelane ngezimpilo zabo nawo wonke umuntu.
Imibandela yokwahlulela ikhwalithi yevidiyo ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili, okuqukethwe kanye nombono. Okuqukethwe kufaka phakathi itimu yevidiyo kanye nalokho ekudlulisayo, futhi ukubukeka nokuzwakala umuzwa obonakalayo nonembile wevidiyo yonke. Nakuba okuqukethwe kupholishwa abezindaba, ukuthuthukiswa kokubukeka nokuzwakala akunakuzitshwa.
Iphuzu elibaluleke kakhulu ekuthwebuleni ividiyo kochwepheshe ukukhanya. Kuvidiyo yakho, ayithuluzi elibalulekile. Khetha ithuluzi elilungile lokugcwalisa ukuze ukwandise ukuthwebula komsebenzi ngamunye.
Indlela yokukhetha i-hue engcono kakhulu nesimo sevidiyo kuyisihluthulelo sokukhanya kwe-vlog. Nawa amanye amathiphu namasu okuqalisa. Manje, ake sibheke ukuthi singasisebenzisa kanjani ngokugcwele isibani esiyiringi ukuze sikhanyise imisebenzi yethu.
1. Setha ukukhanya okunamaphuzu amathathu
Lokhu kusebenza kukho konke ukuthwebula izithombe kochwepheshe, kodwa kuyasiza nakuvidiyo. Ukukhanyisa okunamaphuzu amathathu kuhlanganisa izibani zezinkinobho ezintathu (ngokuvamile amalambu endandatho namabhokisi amabili athambile), futhi ukulungiselelwa kwakho kungakunikeza ukukhanya okufanayo ngaphandle kokuxhopha. Ukusebenzisa lesi silungiselelo sokukhanyisa kungasiza ividiyo yakho ukuthi ibukeke futhi izwakale ngokushesha isezingeni eliphezulu futhi ikhanga kakhudlwana.
2. Beka ukukhanya kweringi endaweni efanele
Uma unquma ukusebenzisa ukukhanya kwendandatho yedwa, udinga ukuyibeka phambi kobuso bakho ukuze kungabikho izithunzi ezinamahloni (hhayi ukuvimbela ubuhle bokukhanya kwendandatho noma ngisho nokukhanya kwayo).
Isibani esiyingini siyisibambo semboni yokusakaza bukhoma, futhi singafakwa kubakaki noma kukhamera. Lokhu kunikeza umthombo wokukhanya oqhubekayo futhi kunciphisa noma yiziphi izithunzi.
3.ukukhethwa kwezibani zendandatho
Uma ufuna izibani zendandatho ezisezingeni eliphezulu, ezinokwethenjelwa kanye ne-oscillating, izibani zamandandatho ziyimikhiqizo yethu ethengiswa kakhulu, engakwazi ukuzivumelanisa nezimo ezihlukahlukene zokudubula. I-Up iwumkhiqizo wokukhanyisa osetshenziswa kakhulu.
Isikhathi sokuthumela: Dec-17-2021 EMUVA
Gcwalisa Ukukhanya, Iphaneli Led Rectangular, I-Led Light Yendandatho Yezithombe, Light Panel Suppliers, Abahlinzeki beLamp Dimmable, Iphaneli ye-Rgb Led,